कुन बार जन्मेका व्यक्तिहरुले कति सम्पति कमाउँछन् ? यस्तो छ भविष्यमा हुने रहस्य – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Intresting/कुन बार जन्मेका व्यक्तिहरुले कति सम्पति कमाउँछन् ? यस्तो छ भविष्यमा हुने रहस्य
आइतबारः यो बार जन्मने व्यक्ति निकै भाग्यमानी हुन्छन् । उक्त बार जन्मने व्यक्तिको आयु पनि लामो हुने गर्छ । कम बोल्ने भएकाले शिक्षामा समेत अब्बल हुने गर्छन् । उनीहरुले घर परिवारलाइृ खुसी राख्न निकै प्रयास गरिरेहेका हुन्छन । यो दिन जन्मेका व्यक्तिलाई २० देखि २२ वर्ष सम्मको उमेरमा निकै कष्ट हुने गर्छ । उनीहरु दान पुण्य गर्न निकै अग्रसर हुने भएकाले उनीहरुलाई २२ वर्ष पछि अत्याधिक धन लाभ हुने योग रहेको छ ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
आज ५८० वर्षयताकै लामो चन्द्रग्रहण लाग्दै, यी ५ राशिलाई हुँदैछ फलिफाप